Waa’ee labsii haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa ittisuufi to’achuuf bahe dhimmoota kunneen beektuu? – ኢትዮጵያ ቼክ
Waa’ee labsii haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa ittisuufi to’achuuf bahe dhimmoota kunneen beektuu?
Labsiin haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa ittisuufi to’achuuf bahe namnootni wayita mirga yaada isaanii bilisa ta’anii ibsachuu fayyadamanitti haasaa walitti bu’iinsa yookin hookkara kakaasu taasisuurraa akka of qusatan gochuuf yaadamee kan ragga’e dha.
Namootni sabummaa, amantaa, sanyii, koorniyaa yookin miidhama qaamaa bu’ura godhachuun haasaawwan nama dhuunfaa yookin garee irratti jibbiinsa yookin loogii babal’isan gochuurra akka of qusatan taasisuunis kaayyoo labsii kanaati.
Labsichi maal hima?
Namni kamiyyuu haasaa jibbiinsaa yookiin odeeffannoo sobaa gama birodkaastii, maxxansa, miidiyaalee hawaasummaafi maloota walfakkaatoo birootiin barreeffamaan, suuraan, sagaleen yookin viidiyoodhaan tamsaasuun dhorkaa akka ta’e labsichi hima.
Labsiin kun jecha ‘tamsaasuu’ jedhu “haasaa bifa kamiinuu namoota baay’ee bira akka gahu gochuu yemmuu ta’u maxxansaalee miidiyaa hawaasaa ‘jaalachuu’ fi ‘tag’ gochuu (like and tag) ofkeessatti hin qabatu” jechuun hiika.
Yakki haasaa jibbiinsaa yookin odeeffannoo sobaa tamsaasuu fuula miidiyaa hawaasaa hordoftoota 5,000 ol qabuun yookiin tajaajila birodkaastiin yookiin maxxansa yeroo yeroon bahuun raawwatame yoo ta’e hidhaa hanga waggaa sadii fi adabbii maallaqaa birrii 100,000 hin caalle adabsiisa.
Kana malees labsichi gosa badii raawwatamefi miidhaa qaqqabe irratti hundaa’uun adabiiwwan garaagaraas kaa’ee jira.
Gama biraatiin wayita labsiin haasaa jibbiinsaafi oduu sobaa ittisuufi to’achuuf bahe ragga’utti namootni baay’een komiisaanii dhageesisaa turan.
Yaaddoowwan ‘labsiin kun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu ni daangessa’ jedhanis dhagahamaa turan.
Dabalataan akkaataan labsichi maalummaa haasaa jibbiinsaafi oduu sobaa itti ibse iftoomina guutuu kan hin qabnedha kan jedhus dhimma komii biraa ture.
Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.